अमेरिकी विमान चार्टर गरी नेपाल फिर्ता, करोड स्वा’हा ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अमेरिकी विमान चार्टर गरी नेपाल फिर्ता, करोड स्वा’हा !
अमेरिकी विमान चार्टर गरी नेपाल फिर्ता, करोड स्वा’हा !
काठमाडौं । असोज १०, २०७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छाड्दै गर्दा दाङका अनिल (नाम परिवर्तन) अमेरिका, पीआर र सुखद भविश्यको सपना देखिरहेका थिए । २६ महिनापछि उही अनिल काठमाडौं ओलिए, बोरा बोकेर ।
अझ यो २६ महिनामा उनको खाएको हण्डर सुन्ने मात्र हो भने पनि अत्यास लाग्छ । मुटु का’म्छ र मुखबाट फुत्तिक्छ, ‘धन्य ! जान जोगाएर फर्किएका रहेछन् ।’
अमेरिकी सरकारले चाटर्ड गरिदिको विमान चढेर काठमाडौं आइपुग्दा अनिलसहित पाँच नेपाली युवासँग पी’डैपी’डाको कथा र पश्चा’तापबाहेक केही छैन । कतिसम्म भने आफ्नो कपडा हाल्ने ब्याग समेत थिएन, त्यसैले केसैले बोरामा त कसैले प्याटिकको थौलोमा झुण्ड्याएका थिए । खल्ती रि’त्तो छ ।
अनि उनीहरुलाई घर कसरी पुग्ने, परिवारका सदस्यहरुलाई के जवाफ दिने भन्ने चिन्ता मात्र छ ।
अमेरिका सपनामा करोड स्वा’हा !
रुकुममा २९ वर्षीय सुरेन्द्र (नाम परिवर्तित) बेरोजगार थिए । गाउँमै बसिरहेका उनलाई आफन्त र छरछिमेकले विकामे भइस् भनेर कराइरहन्थे, बरु विदेश गएर दुई पैसा कमाएर आइज भन्थे । घरका सदस्यहरुले गुनासो गरिरहन्थे ।
गाउँका थुप्रै अमेरिका गएर पीआर लिएको पनि सुन्थे । उनलाई लाग्यो, अब अमेरिका जान्छु, पीआर लिन्छु ।
तर, कसरी जाने थाहा छैन । उनी अमेरिका गएका व्यक्तिको घर परिवारसँग सोधेर एक एजेन्टको सम्पर्कमा पुगे । जसको नाम उनी अहिले खुुलाउन चाहँदैनन् । ती एजेन्टले सुरेन्द्रलाई अमेरिका जान पाउने संकेत त दिए तर, दुई शर्त राखेर ।
पहिलो, जसरी भएपनि अमेरिकी सीमा मेक्सिकोसम्म पुर्‍याउने, तर त्यसपछि जिम्मेवारी लिन नसक्ने ।
दोस्रो, कम्तिमा पनि २० लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्यसमाथि बाटोमा थप रकम आवश्यक पर्न सक्छ ।
अमेरिका सपनाका अगाडि उनी सबै शर्त मान्न तयार भए । ‘अमेरिका पुगिन्छ भने कसले त्यति खर्च गर्दैन र ?’, प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘मैले पनि घर खेत बेचेर, ऋ’ण गरेर पैसा जुटाएको थिएँ ।’ अमेरिका जान भनेर १० असोज २०७४ मा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे ।
एजेन्टले भारत हुँदै यात्रा अघि बढ्ने जनाएका थिए । दिल्लीमा केही दिनको बसाइपछि ब्राजिल हुँदै कोलम्बियाबाट सुरेन्द्रको अवैध अमेरिका यात्राको थालनी भयो । तर पानामा पुग्नुअघि दुःखका दिन सुरु भयो । विचौलियाले देखाइदिएको रुटअनुसार उनी डेरियन ग्याप नामक जंगलको बाटोबाट अघि बढेका थिए ।
जंगलमा एकातिर वि’षालु सर्पको ड’र, अर्कातिर द्व’न्द्वरत् ह’तिया’रधारी समूहसँग पनि जम्काभेट । ‘उनीहरुले हामीसँग भएका सामान लु’टिदिए’, सुरेन्द्रले सुनाए, ‘मसँगै गएका अन्य देशका साथीहरुको पनि सामान केही बाँकी रहेन ।’
पानामा पुगेपछि उनको यात्रा झनै क’ठिन थियो । हरेक दिन नयाँ परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने । कहिले घना जंगलको यात्रा त कहिले डुं’गा शयर । ‘निकारगुवामा त एक सरो कपडा पनि शरीरमा बाँकी रहन दिएनन् । लु’टेर नाँ’गै बनाए’, उनी सम्झन्छन् । यात्राको क्रममा कपडासमेत मागेर लगाए, निकारगुवाबाट हुण्डुरस, गोटेमाला हुँदै चार महिनाको यात्रापछि उनी मेक्सिको पुगे ।
मेक्सिको पुगेपछि अमेरिका छिर्न एजेन्टको सकारात्मक संकेतको पर्खाइमा थिए उनी । सीमा क्षेत्रमा बसिरहेका उनी अनुकुल वातावरण मिलेपछि राति सीमा पर्खाल पार गरे, तर अमेरिकी भूमिमा टेकेको पाँच मिनेट हुन नपाइ प’क्राउ परे ।
उनी भन्छन्, ‘सायद सीसी क्यामराबाट हेर्दाे रहेछ ।’ त्यसपछि ११ महिनासम्म हि’रासतमा बसे । विभिन्न शहरका क्याम्पमा सर्दासर्दै बुधबार नेपाल आइपुगे ।
तीन भाइको कथा उस्तै
रुकुमका सुरेन्द्र मात्र होइन, दाङ घोराहीका ३२ वर्षीय दिनेश, बाग्लुङको धाम्जाका ३० वर्षीय हरि र दाङका २९ वर्षीय अनिलको कथा पनि उस्तै छ ।
स्नातक पढेर विद्यार्थी भिषामा गएका नवलपरासीका ३२ वर्षीय पिताम्बर भिसा नविकरणविनै बसेका कारण फर्काइएका हुन् । अ’वैध बाटोबाट गएका चार जनाले कक्षा ८ देखि १२ सम्म पढेका छन् । एजेन्टले पढाइसँग सरोकार नहुने बताएका थिए ।
अनिलको भने कथा भिन्न छ । ०७४ मा भारत–रसिया–हुण्डुरस–पानामा हुँदै दुई महिनामै अमेरिकी सीमासम्म उनी पुगे । सीमाको पर्खाल कटेको १५ मिनेटमै प’क्राउ परेपछि अन्य झैँ शरणार्थीको रुपमा अमेरिकामा बस्न निवेदन दिए ।
तर हि’रासतमै रहेका वेला थर मिलेका कारण अर्कै व्यक्तिको ट्राभल डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गराएर उनी नेपाल पठाइए । ‘मेरो मु’द्दा अमेरिकामा अझै चलिरहेकै छ’, उनी भन्छन्, ‘मलाई ज’बरज’स्ती कागज पत्र रुजु नगरी नै नेपाल पठाइयो ।’ त्यसवि’रुद्ध वकिलले अझै बहस जारी राखेको उनी बताउँछन् । यो प्रक्रियासम्म आइपुग्दा एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले सुनाए ।
नेपाल प्रहरीको मानव बे’चबि’खन अनुसन्धान ब्युरो (एचटीबी)का अधिकृतकाअनुसार विगतमा माओवादी सशस्त्र द्व’न्द्वका कारण घरवारविहीन भएर नेपालमा बस्न नसकेको भन्दै आवेदन पेश गरिन्थ्यो । २०७२ सालमा भूकम्पका जाँदा पनि केही व्यक्ति त्यसैलाई आधार बनाएर अमेरिकामा बसोबास गरे ।
तर अहिले अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्नेको आवेदन अस्वीकृत हुने गरेको देखिन्छन् । ‘कतिपयले विप्लव समूहबाट त्रास रहेको देखाएर पनि आवेदन दिएको भेटिएको छ’, एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर नेपालमा अहिल्यै विप्लव समूहको समस्या त्यति विकराल भइनसकेको अमेरिकी अधिकृतहरुलाई थाहा छ ।’
अझ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अख्तियार गरेको आप्रवासीप्रतिको कडा नीतिका कारण पनि अवैध रुपमा अमेरिका छिर्न असम्भव रहेको ब्युरोका अधिकृतहरुको दाबी छ ।
चाटर्ड विमानको यात्रा
‘चार्टर विमानमा खर्च गर्नुको साटो पैसै दिनु नि !’
सपनाको देशबाट खाली हात फर्किएका उनीहरु निराशाका बीच ठट्टा गर्छन् । हुन पनि अमेरिकाले ५ नेपाली युवासहित तीन पाकिस्तानीलाई निष्कासन गर्दा नेपाली ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
विशेष प्रकृतिको १६ जना अटाउने विमानमा अमेरिकी सुरक्षा अधिकृतले उनीहरुलाई नेपाल ल्याएका हुन् ।
यसअघि विमान नै चार्टर गरेर नेपालीलाई फर्काएको प्रहरी अधिकृतहरुलाई याद छैन ।
बरु १८ भदौमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका अमेरिकाका मोस्ट वान्टेड यौन दुराचारी नाथन बेडफोर्ड माकोव्स्कीलाई अमेरिका लैजान भने विमान चार्टर गरिएको थियो । त्यसवेला करिब एक लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको बताइएको थियो ।
अमेरिका यात्राको अँ’ध्यारो पाटो विर्सनु हुन्नः प्रहरी
निष्कासित पाँच नेपालीलाई पठाइएको सूचना अमेरिकी दूतावासमार्फत आएपछि प्रहरीको मानव बे’चबिखन अनुसन्धान ब्युरो (एचटीबी) को टोली सोधपुछका लागि विमानस्थल पुगेको थियो । टोलीले पाँचै जनालाई बबरमहलस्थित कार्यालयमा ल्यायो । र, उनीहरुलाई अवैध बाटोबाट अमेरिका लैजोन गि’रोहबारे सोधपुछ गरेको छ ।
तर उनीहरु विचौलिलयाबारे बोल्न मानेनन् । बरु उल्टै भन्छन्, ‘के गर्नु भाग्य नै खोटो रहेछ । सँगै गएका एकजना साथीले पीआर लिइसके ।’
सोधपुछका क्रममा उनीहरुले दुःखका केही कथा त सुनाएका छन्, तर द’लालवि’रुद्ध उ’जुरी दिन मानेका छैनन् । उनीहरुको एकैस्वर छ, ‘लैजानेले पहिल्यै मेक्सिकोबाट उताको जिम्मा लिन सक्दिन भनेको थियो । उसको पनि के दो’ष र !’
तर, यही अवस्था रही रहने हो भने नेपाली युवाको अ’वैध तस्करी नरोकिने ब्यूरोका अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘उजुरी प्राप्त भए अनुसन्धान हुन्छ । तर, उ’जुरी नै पर्दैन भने सूचना राखेर बस्नुको विकल्प हुँदैन’, ब्युरोका डीएसपी नरहरि रेग्मी भन्छन् ।
ब्युरोको अनुमानअनुसार वर्षमा हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा अवैध बाटोबाट अमेरिका जाने नाममा ठ’गिएका छन् । ब्युुरो प्रमुख एसएसपी ईश्वरबाबु कार्की पनि अमेरिका भन्ने वित्तिकै अँ’ध्यारो पाटो पनि छ भन्ने नविर्सन आग्रह गर्छन् ।
आज ९ बजे ‘नेपाली डाक्टरलेनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्र’त्यारोपण गर्दै